क्लिन गोरखाद्वारा चिल्ड्रेनपार्कबाट सार्वजनीक स्थल सरसफाई अभियान सुरु - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
क्लिन गोरखा प्रालीले सार्वजनीक स्थल सरसफाई अभियान सुरु गरेको छ । गोरखा सदरमुकामको फोहोर संकलन र सरसफाईको जिम्मा लिएको प्रालीले शुक्रवारदेखि नगरपालिका भित्रको सार्वजनीक, धार्मीक स्थलको सरसफाई अभियान थालेको प्रालीले जनाएको छ ।
पहिलो दिन प्रालीका सरसफाई कर्मी, कर्मचारी र संचालक सहित २७ जनाले गोरखा नगरपालिका ५ मा रहेको चिल्ड्रेनपार्क क्षेत्रको सरसफाई गरेका थिए । त्यहाँ रहेका फोहोर संकलन गरेर उक्त ठाउँलाई सफा बनाइएको कम्पनीका संचालक सदस्य रञ्जितकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘सार्वजनीक स्थलमा सबै बस्ने, आउने हुन्छ, फोहोर धेरै हुन्छ तर सफा गर्न चासो खासै कसैले दिँदैन’ उनले भने ‘हामीले हरेक हप्ता नगरपालिका भित्रको सार्वजनीक ठाउँमा सरसफाई गर्ने योजना अनुसार सुरु गरेका हौँ ।’ सार्वजनीक स्थल सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि यो अभियान चलाइएको उनले बताए ।
संकलन भएको फोहोर ट्याक्टरमा राखेर डम्पिङ क्षेत्रमा लगिएको थियो । अहिले गोरखा बजार क्षेत्र निकै सफा छ । मूख्य सडक आसपास फोहोर देखिँदैन । गोरखा नगरपालिकाले फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनी (क्लिन गोरखा) लाई दिएपछि बजार पहिलो भन्दा सफा भएको हो । दैनिक १९ जना सरसफाईकर्मीले सरसफाईको काम गर्ने गरेका छन् ।
गोरखा दरबार, रानीपोखरी, पश्चिमकाली लगायत नगरपालिकाको सबै वडामा रहेको धार्मीक स्थल, सार्वजनीक स्थलको सरसफाईलाई निरन्तरता दिने योजना क्लिवन गोरखा प्रालीको रहेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । वडाबासीलाई फोहोर भएका त्यस्ता ठाउँ भए खबर गर्न पनि उनले अनुरोध गरे ।
अहिले गोरखा सदरमुकाममा फोहोर ब्यवस्थापन गर्न सदस्यता शुल्क दुई सय र सेवा शुल्क मासिक रुपमा क्लिन गोरखाले लिँदै आएको छ । एक हजार चार सय ८९ जना सदस्य बनिसकेको प्रालीका म्यानेजर बिष्णु थापा मगरले बताए । ‘दैनिक फोहोर उठाउन गाडी पठाएका छौँ, फोहोर उठेन भन्ने गुनासो छैन’ उनले भने ।
क्लिन गोरखा प्रालीले कुहिने, नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि टोल बिकास संस्थाहरु सँग सहकार्य भई योजना बनिरहेको संचालक सदस्य रञ्जितकुमार श्रेष्ठले बताए ।